နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖန်လုံအိမ် > ဖန်လုံအိမ်အာနိသင် > စတော်ဘယ်ရီဖန်လုံအိမ်
ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်သို့စတော်ဘယ်ရီဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့၊ ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိနိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်သို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် 100% အပျိုစင်ကုန်ကြမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများ၊ အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုသင့်အားပေးမည်
စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် hasamodern and novel in exterior, and hasastable structure.It adopts hot galvanized pipes connected by the hot-galvanizing bolts and tapping screws,without any welding point.So it is strong and practical and also simple beautiful in overall. The covering material is glass which has the high transmittance,good insulation. The design of wide span and pinnacle madealarge operating inner space,a high utilization andagood bandwagon effect. It can be used as large ornamental greenhouse,aquaculture greenhouse, floriculture greenhouse,flower market,shopping mall and ecological restaurant.စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်သက်တမ်းအရှည်ဆုံးဖြစ်သောဖန်လုံအိမ်များသည်ဒေသအမျိုးမျိုးနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
စတော်ဘယ်ရီ၏ 2.Product Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
တစ်ခုတည်းဖန်ခွက်,4+9+ 4,5 +6+ 5,5+9+5ဆွန်းဖန်ကိုရွေးချယ်ပါ
4m or စိတ်ကြိုက်
စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် can be used as large ornamental greenhouse,aquaculture greenhouse, floriculture greenhouse,flower market,shopping mall and ecological restaurant.For flowers planting
A) စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် have many advantages:
(၁) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု - ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းသည် ၉၅% အထိရှိသည်။
(၂) သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည် - ၆ မီလီမီတာ၊ ၈ မီလီမီတာနှင့်သက်တမ်းရှည်သောဆွန်းဖန်များ
(၃) စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း - နွေရာသီတွင်အေးမြပြီးဆောင်းတွင်း၌နွေးပါ။
(၆) အပူချိန်ညှိယူနိုင်မှု - ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်မပျက်စီးပါကအလွန်အေးသောဒေသသို့မဟုတ်ပူပြင်းသည့်နေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
B) စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ်,The skeleton materials of the greenhouse is made by galvanized steel materials,connected by galvanized and anti-rot bolts and screws, no welded point.
C） စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် covering material is
အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဖန်ခွက်များသို့မဟုတ်အခေါင်းပေါက်ဖန်ခွက်၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ ကောင်းမွန်သောအလင်းထုတ်လွှတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ငန်းသက်တမ်းကြာရှည်မှု၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လက်တွေ့ကျကျအသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်း။
D) စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် optional systems for customers choose according to the local conditions and what kind of crops planting.
စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် with good quality with SGS certificate
စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် delivery by container in bulk, we always delivery on time to meet our client requirements.
စတော်ဘယ်ရီဖန်ဖန်လုံအိမ် from Jianda Greenhouse Company Welcome to our factory to haveavisit and any inquiry.